Addi Bilisa Baasaa Ogaaden filannoo keessaa bahuuf fiixeerra jirra jedhe – Kichuu
Addi Bilisa Baasaa Ogaaden filannoo keessaa bahuuf fiixeerra jirra jedhe
Adda Bilisa Baasaa Ogaaden (ABBO)n hanqinoonni adeemsa filannoo irratti turan furmaata hin argatan taanaan filanicha keessaa bahuuf fiixeerra geenyeerra jechuun BBC’tti hime.
(Bbc)–Qophii filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaa marsaa 6ffaa adeemsifamuuf jiru ilaalchisuun BBC waliin turtii kan taasisan miseensi koree hojii raawwachiistuu ABBO fi itti gaafatamaan damee Finfinnee Obbo Ahimad Mohaammad (Nuur Faatullee) dhaabni isaanii filanicharraa bahuuf fiixeerra gahuu himan.
“Hudhaalee baayyee obsaan darbaa turre. Galmee kaadhimamtootaa fi filattootaa irratti obsa guddaadhaan qaama dhimmi ilaalu wajjin dubbachaa asgeenye. Fakkeenyaaf nuti kaadhimamtoota keenya naannoo Somaaleetti galmeesisuu dadhabneeti boordii Filannoo wajjin dubbannee Finfinneetti kan galmeessaa turre” jedhan.
“Filannoo kanaaf kaardiin filattootaa bakka itti saamametu jira. Namni tokko kaardii hedduu bakka itti fudhatetu jira. Kana ragaa viidiyoo fi suuraan boordii filannootiif beeksisneerra. Boordiin filannoos buufataalee filannoo torba irratti tarkaanfii fudhateera” jedhan.
Paartiin isaanii marii ammaan dura boordicha waliin taasiseen filannoon naannoo Somaalee kuni hanqinoota hedduu waan irratti mul’ateef jecha addatti akka ilaalamuu qabu hubannaan tures jedhan.
Yeroo ammaa garuu hanqinootni naannicha keessatti filannoodhaan walqabtee ture osoo hin furamin filannoon guyyana muramee kan naannolee kaanii waliin guyyaa walfakkaataatti qabamuun isaa hirmaannaa filannoo keenya adda kutuutti nugeessuuf jira jedhan.
“Boordii filannoo wajjin mariin taasisaa ture faayidaa maleessa ta’eera yaaddoo jedhu qabna. Kanaaf nuti amma fiixeerra geenyeerra. Adeemsi akkanaa mootummaas boordii filannootis hin fayyadu. Yeroo hafe kanatti tarkaanfiin ariifataan yoo kennamuu baate Nuti filannoo baranaa kanarratti hirmaachuu dhiisuu dandeenya” jedhan.
Adeemsi hanga ammaa boordichi dhiibbaa mootummaa irraabilisa ta’ee hojjecha ajira jenne waan hin amanneef haala amma jiruun yoo itti fufe nuti sirna filannoo bareechuuf sababa itti seennuuf hin qabnu jedhan obbo Ahmad.
Hanqinoonni jiran yeroo amma filannoof hafe keessatti mariidhaan sirrachuu akka danda’uufi fooyyeffama taasifamuu malurraa hanga guyyaa filannootti abdii akka hin kutannes himan.
Addi Bilisa Baasaa Ogaadeen dhaabbilee siyaasaa kan akka KFO fi ABO waliin guyyaa Kamisaa Caamsaa 20, 2021tti adeemsa filannoo fi haala biyyattii irratti hawaasa dipilomaatii waliin marii taasisanii akka turanis Obbo Ahmad BBC’tti himaniiru.
Maricharra irrattis dhimmoonni haala paartiileen siyaasaa kunneen fi biyyattiin ammaan tana keessatti argamaniifi waa’ee fialannoo marsaa jahaffaa Waxabajjii 21 gaggeeffamuuf karoorfamee ilaalchisuun mariin taasisuu Obbo Ahmad ni dubbatu.
Filannoon biyyaalessaa Itoophiyaa Waxabajji 21, 2021 akka gaggeeffamu Boordiin Filannoo Biyyaalessaa beeksiseera.
Filannoo Itoophiyaa 2021: Finfinnee bakka bu'uun paarlaamaaf kan filataman eenyu fa'i?